Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika • Wararka Socdaalka Dhaqanka • Wararka safarka Yurub • Wararka Jarmalka • Arimaha Dowlada • Caafimaadka Warka • Warka Warshadaha Martigelinta • Wararka Booqashada Caalamiga ah • Israel safarka wararka • LGBTQ • kale • dib u dhiska safarka • Ammaanka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • News Trending
Goobaha Dalxiiska Caafimaadka ee leh tallaalka COVID-19 ayaa lagu daray
Bogga ugu weyn » posts » Caafimaadka Warka » Goobaha Dalxiiska Caafimaadka ee leh tallaalka COVID-19 ayaa lagu daray
Sugitaanka seddex isbuuc inta udhaxeysa tallaalka koowaad iyo kan labaad ee lagu toogtay badda agteeda xeebta Seychelles ee cadcad uma eka mid aad u xun
Dalxiiska Caafimaadka waa ganacsi weyn oo laga helo adduunka oo dhan. Laga soo bilaabo abuurka ilkaha ilaa wadnaha ee loo beero dalxiis caafimaad ayaa daboolaya wax walba iyo meelo badan.
Tallaalka COVID-19 ayaa adduunka oo dhan looga baahan yahay baahi weyn, laakiin waddamada qaar ayaa ka horumarsan kuwa kale ama leh dad aad u tiro yar.
Dalxiiska 'COVID-19' ayaa laga yaabaa inuu noqdo fursadda xigta ee u oggolaaneysa in badan si tallaalku dhakhso loogu helo.
Qalitaanka timaha iyo ilkaha oo la geliyo ayaa ganacsi weyn ku leh dalka Turkiga. Talaalada Coronavirus waxay leeyihiin dhamaan waxyaabihii ay ka koobnaayeen si ay u noqdaan fursad dalxiis oo soo koraysa, hawlwadeenada dalxiiskuna durba way soo baxayaan
Suuqa Dubai ayaa furan. Safar raaxo raaxo leh oo saddex usbuuc ah iyo safar xeebeed oo lagu tagayo Isutagga Imaaraatka Carabta iyo tas-hiilaadka caafimaadka heerka koowaad iyo qaar ka mid ah hudheelada raaxada ugu fiican adduunka ee diyaar u ah inay kuu adeegaan ayaa u muuqda kuwo soo jiidasho leh. Tani waxay si gaar ah run u tahay haddii fasaxan ay ku jiraan labadaada tallaal ee COVID-19.
Sugitaanka saddexda toddobaad ee u dhexeeya tallaalkaaga koowaad iyo labaad ee COVID-19 ee lagu toogto xeebta raaxada ee xeebta cad ee xeebta Badweynta Hindiya ee Seychelles uma muuqato wax aad u xun dad badan.
Aragtida 'Dead See' ee Israa'iil waxaa badanaa loo arkaa inay tahay barta ugu caafimaad badan adduunka. Israel waxay qabaneysaa shaqo weyn sidii muwaadiniinteeda loo tallaali lahaa, fursadaha dalxiis ee fasaxa tallaalkuna waxay ku soo dhowaan karaan goor dhow.
Sida laga soo xigtay wararka maanta la daabacay Jarmal RTL iyo Stern Magazine, FIT REISEN, oo ah hawl wadeen dalxiis oo Jarmal ah oo ku sugan Hamburg ayaa qorsheynaya fasaxyo caafimaad oo qaali ah oo la socda waxyaabo muhiim ah oo naf-badbaadin ah: Tallaalka Coronavirus.
Sida laga soo xigtay FIT REISEN, xirmo bilow ah ayaa la iibin doonaa EURO 2000- 3000 oo lagu daray qiimaha daawada iyo qiimaha tallaalka.
FIT Reisen waxay sii deysay bayaanka soo socda:
“Waxaan ka helaynaa codsiyo badan macaamiisheenna safar dalxiis oo caafimaad oo la imaan kara tallaalka COVID-19. Waxaan si taxaddar leh u baareynaa xulashada noocan ah. Waxaan la xiriirnaa meelo kala duwan.
Waxaan hadda aqbalnaa diiwaangelinta aan xaraashka lahayn ee degelkeenna www.fitreisen.de/impfreisen , si kastaba ha noqotee, waqtigan ma hayno barnaamij gaar ah oo aan iibino. ”
Hawl wadeenka Dalxiiska ayaa ku sharxaya boggiisa internetka.
Waa maxay safarka tallaalku?
Safarka tallaalku waa 3 illaa 4 usbuuc oo fasax caafimaad ah halkaas oo socotadu fursad u leeyihiin inay qabsadaan laba booqasho dhakhtar oo ay ku helaan tallaalka Coronavirus. Hawl wadeenka dalxiisku wuxuu ballan qaadayaa hudheelo raaxo leh iyo nasasho halkaas oo martida loo adeegsan doono laguna kharibi doono yoga, Ayurveda, iyo duugista.
FIT Reisen ayaa raacisay: “Kama qaadi doonno tallaalka dadka deegaanka. Waxaan soo bandhigi doonnaa oo keliya xirmooyinkayada marka inta badan dadka deggan waddammada aan u socono la tallaalo. ”
Khabiirka caafimaadka Jarmalka Karl Lauterbach wuxuu u arkaa hab ganacsi noocaas ah anshax xumo.
Israa’iil waxay haysaa bayaan aad u mugdi badan oo sheegaya in fursaddan oo kale aan la bixin xilligan. Israel wali way uxirantahay dalxiiska, laakiin waxaan rajeyneynaa in dhamaan reer Israel ay awoodi doonaan inay si dhaqso ah u helaan talaal.
Sherin Francis, oo ah Maamulaha Golaha Dalxiiska Seychelles ayaa la yaabay maqalka ku saabsan horumarkan eTurboNews kamana warqabin safarada talaalka ee loo qorsheeyay dalkeeda jasiiradda ah. Waxay ballanqaaday inay baari doonto oo ay sii hayn doonto eTurboNews wixii isbeddel ah.
Xubin ka tirsan guddiga Shabakada Dalxiiska Adduunka Ma uusan rabin in la magacaabo laakiin wuxuu yiri: Waxay u badan tahay inay waqti uun tahay. Wadahadalka lacagta.
Dhibaatooyinka loo geysto meelaha laga buuxiyo hudheelada qiimaha sagxadda ayaa ah kuwo soo jiidasho leh. Haddii warshadaha iyo hoggaamiyeyaasha dowladdu ku heshiin karaan oo keliya in la taageero lana sharciyeeyo howlaha noocan oo kale ah ka dib marka dadka maxalliga ah la tallaalo, tani waxay si aad u wanaagsan u noqon kartaa fursad iyo barako warshadaha safarka iyo dalxiiska ee dalal qaarkood.